QISO YAR OO CAJIIB AH. (Waa Qiso kaa Oohin doonta). – Murtimaal
QISO YAR OO CAJIIB AH. (Waa Qiso kaa Oohin doonta).
05/20/2017 Video News NEWS
QISO YAR OO CAJIIB AH.
(Waa Qiso kaa Oohin doonta).
Waxey ahayd Hooyo Dhameysatay Sagaalkii Bilood ee Uurka ku jirta, waxa la gaaray Xilligii Foosha, waxaana la geeyey Cusbitaalkii, Haddii lagu eegay Qalabkii Kombiyuutarka waxa la arkay iney siddo Wiil, Farxad iyo Riyaaq ayaa lala joogsaday.
Waxaase laga naxay War sheegaya in aan la Badbaadi karin Hooyada iyo Cunugeeda. Kolkuu Dhakhtarku si Cilmi ah u darsay Xaaladda Hooyada iyo Canuugga la filayo in uu ifka yimaaddo Laba cisho ka dib wuxuu si Deggen u yiri ”Aniga oo ka Xun, waxaan idiin sheegayaa in ay adag tahay Badbaadada Hooyada iyo Wiilkeedu. Waxa noo Suurtogal ah in aanu samata bixino midkood, waa in aad dib isugu noqotaan Qoys ahaan oo aad kala doorataan ka aanu ku Dadaalno Samata bixiisa. Weliba waxa aad haysataan Fursad ah Hal saac”.
Waxey ahayd Hooyo ka dhalatay Qoys ballaaran oo Curadkeedii koowaad loo Dabaal degaayay, Seygeedi wuxuu ku Geeriyooday Shil Baabuur sidaas ayaa Madiga loogu muujinayay Farxad iyo Riyaaq.
Mar keliya ayaa Oohin lala jeedsaday, waxa Madasha ku sugnaa Gabar ay walaalo yihiin Hooyada Foolaneyso ”Walaalo aynu Noloshaada Badbaadino, waan ku jecelnahay, waxaad tahay Gacanteenii Midig. Alle ayaa ku siin doona ilmo kale, waan kuu Ducaynayaa”. ”Sidee ayaan u yeeli karaa Dhimashada Wiilkayga, ma Oggolaan karo in uu Curadkaygu Saqiiro. Dhakhtarka waxaan ka Codsanayaa in uu Wiilkeyga Badbaadiyo. ee Walaalo ii keen Warqad aan Dardaaran uga dhigo Wiilkayga oo uu Akhristo marka uu Jaamacaddiisa dhammaysto, adigana waxa aan kugu Sagootinayaa Daryeelka Inankeyga. Haddii aad adigu Nooshahay, dhib uma qabo Dhimashada oo uma Werweraayo Dayac iyo Darxumo ku Dhaca Rajayga iyo Agoonka aan ifka ku Sagootinaayo”.
Haddaba, Waa tan Warqaddii ay Hooyadu ku Nabaadiineysay Walaasheed ee Hoga-tuska u ahayd Wiilka aan Nasiibka u helin in uu Dhaayaha saaro Hooyo Macaan iyo Aabbo.
Ku: Walaashayda Rumaad ee maragga u ah Urugada iyo Xaaladdayda Cakiran
”Walaal, waxaan doorbiday in aan Xabaal galo si aan u badbaadiyo Wiilkeyga Curadka. Wiilkaygu ma geyo in la Uurjeexo, waxa aan ka urinayaa Aabbihii oo ahaa Geesi. Si ay u jirto Tafiirta Saygii uu Wedku iga qaaday waxa aan Doorbiday in aan Dhinto. Walaal, Nafteyda waxan ka doorbiday Nolosha Wiilkayga. Ma oggolaan karo in uu Dhinto isaga oo aan ifka cagaha saarin.
Walaal Wiilkaygu yaanu Dayac iyo Darxumo ifka ku arkin, Walaal yaan Wiilkeyga lagu wiirsan. Daryeel oo u roonow walaal. Walaal u daadihii sidii Suubanayd ee la inagu soo Koriyay. Walaal maryihiisu ha noqdaan kuwo had iyo goor Nadiif ah. Walaal yaanu marna tebin Buug iyo Qalin. Walaal wuxuu doonaba Midigta ka saar. Walaal yaanu Arrad, Uskag, Aafo iyo Dibindaabyo midna arkin. Walaal yaanu ogaan sababta aan u Geeriyooday ilaa uu Heer Jaamacad ka dhameynaayo, yaanu i tebin walaal. U gal Booskeygii. Walaal belaayada Alle ha ka Xijaabo. Walaal Alle ha ka yeelo kii Caqligiisu Hoggaamiyo ee aanay Calooshu hagin. Walaal Ilaahey ha ka dhigo mid Diin, Deeq iyo Dulqaad leh. Walaal magaciisa u bixi Maxamed, waa Nebigii Suubbanaa Calayhi Salaatu Wasalaam. Walaal Wiilkayga la ogoow wax kasta oo fiican, kana ilaali wax kasta oo Cun. Walaal waa rajay iyo agoon, Walaal marna yuusan i tebin.
(ILAAHOOW HOOYO JANNADA KA WARAABI).
WALAL HADII QISADAN AAD AKHRISATAY FADLAN SII SHARE GAREE LAWADAG ASXAABTADA
Previous Post:Subxan Allah Daawo qiso naxdin gabadh heesha dhagaystan jirtay oo mucjiso la tusay
Next Post:Degdeg Daawo siyaasiga cali khalif oo so gaadhay Hargeysa imika lana dajiyey Hotel Maansoor